गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य गर्न सरकार उत्साहितः प्रधानमन्त्री ओली «
गैरआवासीय नेपाली संघको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्यका लागि सरकार उत्साहित रहेको बताए । मुलुकको विकासका निम्ति प्रविधि तथा ज्ञानको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञान, सीप र प्रविधिको विकास अब नेपाल आफैले गर्ने र आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने बताए ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै देश समृद्ध र सक्षम बनाउन चाहने एनआरएनको सोचलाई सरकारले उत्साहका साथ लिइरहेको बताउँदै सबैको सोच, सहयोग, ज्ञान र सीपले नै नेपाल समृद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली अर्थतन्त्र अझै सक्षम भई नसकेकाले बाहिरी लगानी भिœयाउन आवश्यक रहेको र त्यसमा एनआरएनएले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । गैरआवासीय नेपाली संघले उठाएको माग सरकारले पूरा गर्ने क्रममा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय अघि बढिसकेको जानकारी गराए । यसैगरी सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीका बेला जनतालाई केही अप्ठ्यारो नहोस् भन्नेमा सरकारले पूर्णतस् ध्यान दिइरहेको बताए ।
यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले कोरोना महामारीले बहुआयामिक चुनौती थपिएको भन्दै त्यो चुनौतीको सामना गर्न विश्वभर छरिएर रहेका उर्जावान नेपालीहरुको सहयोग अपरिहार्य हुने बताए । नेपालभित्र रहेका सम्भावनालाई उजागर गरेर मात्रै आर्थिक उत्थान गर्न सकिने भन्दै उहाँले नेपाली विज्ञहरुलाई स्वदेशमा त्यस्ता सम्भावनाको खोजी गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजूले सम्मेलनमा सहकार्य गर्न पाएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै विज्ञ सम्मेलनले नेपाल र नेपाली एवं विदेशी विज्ञबीच ज्ञान तथा प्रविधिको आदान–प्रदानमा पुलको काम गरेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले गैरआवासीय नेपालीले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाई समृद्ध मुलुकको सपना पूरा गर्न एनआरएनएसँग सहकार्य गर्न नीजि क्षेत्र तयार रहेको बताए । उनले चुनौती देखाउने मात्रै नभई सम्मेलनमार्फत अवसरको खोजी गर्न सुझाइन् ।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले मातृभूमिलाई यतिबेला ज्ञान, सीप र बौद्धिकताले अघि बढाउनुपर्ने बेला भएकोले त्यही आवश्यकता पूर्ति गर्न सम्मेलन प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली विज्ञ तथा उद्यमीहरुले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा ठोस योजना ल्याए त्यसको लागि पुँजी संकलनको जिम्मा आफूले लिने उनले स्पष्ट पारे ।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष एवं संरक्षक जीवा लामिछानेले अहिलेको युगमा ज्ञान प्रविधि र सीप हस्तान्तरण विकासको लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । देशको समग्र विकासमा आर्थिक पुँजी जस्तै बौद्धिकता, विज्ञान र प्रविधि आवश्यक पर्ने बताउँदै लामिछानेले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीसँग रहेको ज्ञान सीप र प्रविधि तथा मानव संशाधन प्रयोग गर्न अहिले महत्वपूर्ण समय रहेको जनाउनु भयो । कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुको भूमिका अपरिहार्य हुने उहाँको भनाई थियो । उनले नीति निर्माण तहमा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुलाई समेत सहभागी गराउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक देवमान हिराचनले एनआरएनए संस्था मात्रै नभई एक अभियान भएकोले स्वदेशका लागि केही गर्ने समय आएको बताए । उहाँले समृद्ध मुलुकको सपना पूरा गर्न गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सबैलाई आह्वान गरे ।
एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक डा. शेष घलेले कोरोना महामारीको कहरबाट जुध्दै गरेको मातृभूमिलाई आफ्नो तर्फबाट जे जसरी हुन्छ सहयोग गर्न आह्वान गरे । उनले कुरा भन्दा पनि काम गरेर देखाउने बेला भएकोले स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी हुनेखालका र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका उपलब्धिमुलुक योजना ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । सम्मेलनले कार्यान्वयनमुखी योजनामाथि घनीभूत छलफल गर्ने उहाँको विश्वास थियो ।
एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले विश्वव्यापीकरणको यस युगमा संसारभरका नेपालीले आर्थिक र बौद्धिक समृद्धिलाई अघि बढाउन एनआरएनएको महत्वपूर्ण भूमिका औंल्याए । उहाँले पहिलो विश्व ज्ञान सम्मेलनका सुझावको श्वेतपत्र सरकारलाई बुझाएको र त्यसको केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको बताउँदै यस सम्मेलनमा विगतमा भएका कार्यन्वयनको समीक्षा गर्दै दोस्रो सम्मेलनका सुझाव कार्यान्वयनमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधि स्वदेशमा भित्र्याउन सम्मेलन कोशेढुङ्गा हुने बताए । विदेशमा रह ेपनि स्वदेशको समृद्धिमा हातेमालो गर्ने चाहना हरेक गैरआवासीय नेपालीको रहेको उनले बताए । एनआरएनएको लगानी पुँजी मात्रै नभई भावना पनि भएको भन्दै उनले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप एवं पूँजीलाई एकीकृत र संगठित पार्दै मातृभूमिको हितमा अत्यधिक रुपमा प्रयोग गर्न संघले काम गरिरहेको जनाए ।
एनआरएनए महिला उपाध्यक्ष रविना थापाले गैरआवासीय नेपाली जहाँ बसे पनि स्वदेशप्रतिको जिम्मेवारीबाट कहिले पछि नहटेको बताउनुभयो । मुलुकमा जतिजति बेला संकट आउँछ त्यति बेला एकजुट भएर अघि बढेको उनको भनाइ थियो । कोरोना कहरमाझ पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले सकेसम्मै सहयोग गरिरहेको उहाँले बताए ।
आइतबारसम्म चल्ने तीन दिने विज्ञ सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्र रहनेछन् । साथै २५ भन्दा बढी देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरुको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा २०० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछन् । विशेषः कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र कोरोनापश्चात् विश्वभर चालिएका कदम र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनासंग सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।